(Photo Credit: Senior General Min Aung)
ဒီကနေ့ဟာ (၇၁) နှစ်မြောက် တပ်မတော်နေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ တပ်မတော်နေ့နဲ့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးဆိုပြီး အခေါ်အဝေါ် ကွဲပြားမှုတွေ ဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့ NLD အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် အစိုးရလက်ထက်မှာ လက်ရှိ ကျင်းပနေတဲ့ တပ်မတော်နေ့ကို ဖက်ဆစ် တော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲ သတ်မှတ်သွားမယ်လို့ NLD ပါတီ နယကလည်းဖြစ်၊ တပ်မတော် ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ်ဟောင်းလည်း ဖြစ်ခဲ့ဖူးတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ဦးတင်ဦးက ပြောကြားလိုက်ပါတယ်။
မြန်မာနိုင်ငံကို ကျူးကျော် ၀င်ရောက်လာတဲ့ ဖက်ဆစ် ဂျပန်တွေကို စတင် တော်လှန်တဲ့ မတ်လ (၂၇) ရက်ကို မူလက ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့အဖြစ် သတ်မှတ် ခေါ်ဆိုခဲ့ပေမဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေ၀င်းလက်ထက်မှာ တပ်မတော်နေ့အဖြစ် ပြောင်းလဲ ခေါ်ဆိုခဲ့တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့၊ တပ်မတော်နေ့အကြောင်း ဗွီအိုအေ ၀ိုင်းတော်သား ကိုဉာဏ်ဝင်းအောင်က ဆက်သွယ်မေးမြန်းတဲ့အခါ နယကကြီး ဦးတင်ဦးက အခုလို စပြောပါတယ်။
ဦးတင်ဦး။ “မတ်လ (၂၇) နေ့က ဂျပန် ဖက်ဆစ်ကိုတော်လှန်တဲ့နေ့ သတ်မှတ်လိုက်တဲ့နေ့ ဖြစ်တာကြောင့်မို့လို့ အဲဒါကြောင့် (၂၇) ရက်နေ့ကို ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့ သတ်မှတ်လိုက်တာပါ။ အရင်တုန်းက တောက်လျှောက်က ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးပဲဗျ။ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေး ဆိုတာကနေပြီးတော့ အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက်မှာ ဦးနေ၀င်းကို တပ်မတော်ရဲ့ အကြီးအကဲအဖြစ် ပေးလိုက်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်း တပ်မတော်သားတွေနဲ့ ပတ်သက်ပြီးတော့ နိုးကြားတက်ကြွအောင်ဆိုပြီးတော့မှ လှုံ့ဆော်တဲ့အနေနဲ့ မတ်လ (၂၇) နေ့ကို တပ်မတော်နေ့ဆိုပြီး လုပ်လိုက်တာပဲ။”
မေး။ “အဲဒီတော့ ဒီ ဖက်ဆစ်ဂျပန်တော်လှန်ရေးနေ့ဆိုတဲ့ အသုံးအနှုန်းကို ပြောင်းလိုက်ရတာက ဂျပန်အစိုးရနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ထိခိုက်မှာ စိုးလို့လားခင်ဗျ။”
ဦးတင်ဦး။ “အဲဒီတုန်းကလဲပဲ၊ အဲဒီလိုပဲ သိုးသိုးသန့်သန့် ပြောသံ၊ ဆိုသံလေးတွေ ကြားလိုက်တယ်။ ဂျပန်နဲ့ ဆက်စပ်ပြီးတော့ လုပ်တဲ့ဟာ အပိုင်းမှာ၊ ဆက်ဆံတဲ့နေရာမှာ စီးပွားရေးတို့၊ ဘာတို့ ညာတို့ စသဖြင့်ပေါ့ဗျာ၊ ပိုကောင်းအောင် ပြောင်းလိုက်တယ်ဆိုတဲ့ သဘော သက်ရောက်သွားတယ်လို့ ကျနော်ထင်တယ်ဗျ။”
မေး။ “အဲဒီတော့ အန်ကယ်တို့ရဲ့ NLD ပါတီ အစိုးရလက်ထက်မှာရော ဒီ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ကို တပ်မတော်နေ့ လို့ပဲ ဆက်ပြီးတော့ သုံးနှုန်းမလား၊ ဒါမှမဟုတ်ရင် ဆက်စစ်တော်လှန်ရေးနေ့ အဖြစ် ပြန်ပြီးတော့ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ဖို့ ဘယ်လိုရှိပါသလဲ။”
ဦးတင်ဦး။ “အမှန်ကတော့ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့လို့ပဲ ပြန်လည်ပြီးတော့ ပြင်ဆင် သတ်မှတ်ဖို့ပဲ ဆုံးဖြတ်တာ ဖြစ်တော့ကာ တောက်လျှောက် ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ပဲ ကျနော်တို့ လုပ်ပါတယ်။ အဲဒါကို တပ်မတော်နေ့လို့ မလုပ်ပါဘူး။ အဲဒီတော့ တပ်မတော်နေ့ ဆိုတာကတော့ အမှန်ကတော့ တပ်မတော် စတင်တည်ထောင်တဲ့နေ့ဟာ တပ်မတော်နေ့ ဖြစ်သင့်တယ်ဆိုပြီးတော့ ကျနော် ၁၉၄၁ ခုနှစ်၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၆ ရက်နေ့ ထင်တယ်၊ အဲဒီနေ့ကိုတော့ တပ်မတော်နေ့အဖြစ် ပြန်လည် သတ်မှတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဆိုတာကို ဟိုတုန်းက အဖွဲ့ချုပ်က လုပ်ခဲ့တာ။ အဲဒီလိုပဲ သဘောထား ပြောပြီးတော့ကာ ဒါကို တပ်မတော်နေ့အစား ကျနော်တို့ ဒီ မတ်လ (၂၇) ရက်နေ့ကို ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ လို့ပဲ ပြောင်းပြီး ခေါ်တာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတို့ ဘန်ကောက်မြို့မှာ B.I.A. စပြီးတော့ တည်ထောင်တဲ့ နေ့ဟာ ကျနော်တို့ တပ်မတော်နေ့၊ တပ်မတော်ကို စတင် တည်ထောင်တဲ့နေ့မို့လို့ စတင် ပေါက်ဖွားတဲ့နေ့ကို အဲဒီနေ့ကို တပ်မတော်နေ့လို့ ခေါ်သင့်တယ်၊ ခေါ်ကြရမယ်ဆိုပြီးတော့ C.E.C. မှာ ဆုံးဖြတ်ကြတာပဲလေ။ စပြီး အဖွဲ့ချုပ်ထောင်ကတည်းက စပြီးလုပ်လာတာ တောက်လျှောက်။ အခုလည်းပဲ ဖက်ဆစ်တော်လှန်ရေးနေ့ပါပဲ။ တပ်မတော်နေ့ မဟုတ်ဘူး။”
ဒီကနေ့ ကျင်းပမယ့် တပ်မတော်နေ့ စစ်ရေးပြအခမ်းအနားမှာ ပါဝင်ကြမယ့် စစ်ကြောင်းတွေဟာ အခု အသံမလွှင့် မိနစ်ပိုင်းအလိုက စပြီး နေပြည်တော် တပ်သစ်ကွင်းမှာ စုဝေး ရောက်ရှိနေကြပြီ ဖြစ်ပါတယ်။